လမ်းမကြီးအဓိကရုဏ်းအခမဲ့ download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » လမ်းမကြီးအဓိကရုဏ်း
လမ်းမကြီးအဓိကရုဏ်း APK ကို
လမ်းမကြီးအဓိကရုဏ်းဒီစွဲလမ်း, action ကို-ထုပ်ပိုးသေနတ်သမားအဆုံးစွန်စမ်းသပ်ဖို့သင့်မောင်းနှင်မှုကျွမ်းကျင်မှုထားမည်! သန်း 20 ကျော် Downloads နှင့်အတူတိုက်ခိုက်ရေးပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားသတ်မှတ်ထားသောကြောင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုပါ! Dodge ဒုံးကျည်များ, ရန်သူကားများကိုဖျက်ဆီးခြင်းငှါ, သင်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အဆင့်၏ထိပ်မှပြေးပြိုင်ပွဲအဖြစ်ဖျက်ဆီးခြင်း၏တစ်လမ်းကြောင်းထားခဲ့ပါ!
Engadget.com လမ်းမကြီးအဓိကရုဏ်းတိုက်ခိုက်ရေးပြိုင်ပွဲ "ဂန္ arcade ကိုးကွယ်ချေ။ " ပြောပါတယ်
ကိုခစျြတယျဆိုတာဘာမဟုတ်လား အစာရှောင်ခြင်းကားများ, ကြီးမားတဲ့သေနတ်များ, ချောမွေ့ပြောင်လက်ကိုလက်နက်နှင့်ဘုန်းအသရေသင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်!
ကားများပြိုင်ကားဒီအများကြီးပျော်စရာခဲ့ဘယ်တော့မှခဲ့သည်! လမ်းမကြီးအဓိကရုဏ်းတိုက်ခိုက်ရေးပြိုင်ပွဲ :: ရန်သင့်အားစိန်ခေါ်
* လူမျိုး, shoot နှင့်လမ်းဆင်းအရှိန်အနေဖြင့်ပြိုင်ဘက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုဖကျြဆီးရ!
* 15 လက်နက်များ, သံချပ်ကာ, အခြမ်းလက်နက်နှင့်ထွက်နေတဲ့အဆင့်အဖြစ်အထူးကားငါးအမျိုးအစားများနှင့်သင်၏စီးနင်း Customize: အားကစားကား, သံလိုက်ကား, ဒုံးမော်တော်ကား, လေဆာကားများနှင့်ပေါက်ကွဲမှုကား။
ကွာကျပန်းဒုံးကျည်, ဒုံးကျည်များနှင့်ပေးလျက်ရှိထံမှ * Dodge ပါဝါမြှင့်တင်ရန်, လိမ်ဖဲ့ခြင်း, ရမှတ်တိုးပွားစေကဲ့သို့ ups, နှင့်ရန်သူများကိုနှင့်အကြီးအကဲတွေကျော်အပိုဆောင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုရဖို့ရန်သံလိုက်ဖမ်းပြီးကူးခုန်နေစဉ်။
သငျသညျအဝင်ဒုံးကျည်များနှင့်သေနတ်မီး dodging နေချိန်မှာအတိတ်ရန်သူကားများ, ရေနံတင်သင်္ဘောများနှင့်ရဟတ်ယာဉ် Race အဖြစ်ယနေ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာကို Join! [EL4]
✔အံ့သြစရာ Race အတွေ့အကြုံ။
-3ကွဲပြားခြားနားသော enviroments မှာသင်၏ရန်သူတို့ကိုနှိမ့်ချရိုက်ကူးနေစဉ်ရန်သူအသွားအလာအားဖြင့်သင်တို့၏လမ်းမြန်စေ
- Fight ခေါင်းကို-to-ခေါင်းကိုပြိုင်ဘက်အုပ်စုများအနေဖြင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ Tank Boss အဖြစ်ပစ်ခတ်မှုကားများနှင့်အတူ
- Dodge ဒုံးကျည်များ, သေနတ်မီးများနှင့် traffic ကိုအတားအဆီးတွေ
- 100 ကျော်မစ်ရှင်နှင့်အောင်မြင်မှုများမှတဆင့်လူမျိုး
-6ကွဲပြားခြားနားသောဆေးသုတ်ရွေးချယ်မှုနှင့်အတူသင်အကြိုက်ဆုံးအရောင်အဆင်း Pick
အမျိုးမျိုးသောလက်နက်တွေ, AND CAR အမြိုးအစားမြားနှငျ့✔အအေးဆုံးအညွန့်
- သင့်ရဲ့အဓိကလက်နက် Upgrade နှင့်ရန်သူကားများကတဆင့်ဗုံးမှအဆ 15 မှတက်သံချပ်ကာ
- တိုက်ခိုက်ရေးကာလအတွင်းရန်သူကားများပေါ်သို့သော့ခတ်ရန်အလိုအလျှောက်သေနတ်ထွက်နေတဲ့ Add
- အမြင့်ဆုံးပျက်စီးခြင်းအဘို့စိတ်ကြိုက်5တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်များ: အားကစားကား, သံလိုက်ကား, ဒုံးမော်တော်ကား, လေဆာကားများနှင့်ပေါက်ကွဲမှုမော်တော်ကား
✔ဆုကြေးငွေနှင့် POWERUPS တန်ချိန်ဝင်ငွေ
- နေ့စဉ်အကြွေစေ့နှင့်ရတနာဆုလာဘ်ပင်မြန်ဆန်သင့်ကားကို upgrade ရယူပါ
နိုက်ထရပ် Boosters နှစ်ချက်လက်နက်: -5ကွဲပြားခြားနားသောပါဝါ ups နဲ့အစွန်းယူလိုက်ပါ
တောင်ပေါ်, ပြုပြင်ပစ္စည်းများ, အစွမ်းထက်ပြန်ပေးလော့သံလိုက်နှင့်ရမှတ်တိုးပွားစေ
✔သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ Play နှင့် LEADERBOARD စည်းကမ်းများ
- ဝါကွှား, သင်၏မိတ်ဆွေများကိုစိန်ခေါ်နှင့်အကြွေစေ့ဆုလာဘ်ရဖို့ဘဝတွေကိုနှင့်ဖိတ်စာပို့လိုက်ပါ။
- နက်နဲသောအရာ box ကိုကစားအားဖြင့်သင့်ကံစမ်းခြင်းနှင့်အံ့သြစရာဆုလာဘ်အနိုင်ရ
လမ်းမကြီးအဓိကရုဏ်းတိုက်ခိုက်ရေးပြိုင်ပွဲကြောင်းန်းကျင်ကိုအကောင်းဆုံးအစာရှောင်ခြင်း PACE ပြိုင်ကားဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်သင့်ရဲ့ adrenaline ချပေးရဖို့သေချာပါ!
ယနေ့ဓာတ်ငွေ့အပေါ်အဆင့်လမ်းမကြီးအဓိကရုဏ်းတိုက်ခိုက်ရေးပြိုင်ပွဲကို download လုပ်ပါ!
မည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ချက်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်, ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုရောက်ရှိဖို့: roadriot@junegaming.com
46.30 ကို MB
titan မိုဘိုင်း LLC
ရီးရဲလ်ပြိုင်ပွဲ3App ကို ...